ထိတျလနျ့သညျးဖို ဇာတျကားကောငျးမြားစုစညျးမှု။ – SoShwe
So Shwe 1 week ago	Entertainment Leaveacomment
၁။ Blood Red Sky
သှေးစုပျဖုတျကောငျတဈဦးဖွဈနတေဲ့ Nadja ဟာ ကုသမှုခံယူဖို့ ဝဒေနာကို ကွိတျခံစားရငျး လယောဉျနဲ့ အတ်တလန်တိတျသမုဒ်ဒရာကို ကြျောဖွတျပွီး ခရီးသှားနတေဲ့အခြိနျမှာ လယောဉျပျေါမှာ ပွနျပေးဆှဲသူတှပေျေါလာခဲ့ပွီးနောကျ လူသား သားငယျလေးကို ကာကှယျဖို့ ပွနျပေးဆှဲသူတှကေို ဘယျလိုတိုကျခိုကျပွီး အဆုံးသတျမှာ ဘာတှဖွေဈသှားမလဲ?
၂။ The Fear Street Trilogy
ရကျရကျစကျစကျ သတျဖွတျတာမြိုးနဲ့ ဒဏ်ဍာရီဆနျတာမြိုး ရှာနတေယျဆိုရငျတော့ “The Fear Street” ကို ကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ ဒီဇာတျကားထဲမှာ အပိုငျး (၃) ပိုငျးပါပွီး ၁၉၉၄ ခုနှဈ ၊ ၁၉၇၈ ခုနှဈနဲ့ ၁၆၆၆ ခုနှဈတှတေုနျးက အဖွဈအပကျြတှရေဲ့ ဆကျနှယျမှုတှကေို စိတျခွောကျခွားဖှယျ ကွညျ့ရှုခံစားနိုငျပါတယျ။
၃။ Halloween Kills
သှေးထှကျသံယိုတှနေဲ့ အနိဌာရုံမွငျကှငျးတှကေို ဆကျတိုကျမွငျတှရေ့မှာမို့ စိတျမခိုငျတဲ့သူတှအေနနေဲ့ မကွညျ့သငျ့တဲ့ဇာတျကားဖွဈပမေယျ့ Halloween Kills ရဲ့ အဓိကဇာတျကောငျ လူသတျသမားကွီး Michael Myers တဈယောကျ Halloween ညမှာ လူတှကေို ဘယျလိုသတျဖွတျမလဲဆိုတာကို ကွညျ့ရှုဖို့ စိတျလှုပျရှားစှာ စောငျ့ဆိုငျးနသေူတှေ အမြားအပွားရှိပါတယျ။
၄။ Last Night in Soho
နာမညျကွီး ဖကျရှငျဒီဇိုငျနာတဈဦးဖွဈတဲ့ Eloise ရဲ့ အိမျမကျလှလှတှေ ပကျြစီးသှားပွီးနောကျ မထငျမှတျထားတဲ့ အလှညျ့အပွောငျးက သူ့ရဲ့ ခတျေမှီတဲ့ ဘဝနထေိုငျမှုပုံစံကို ဘယျလိုပွောငျးလဲပဈလိုကျမလဲ?
ညစဉျညတိုငျးမှာ လူတဈယောကျဟာ နအေိမျထဲကို ခိုးဝငျလာလရှေိ့ပွီး စာရေးဆရာနဲ့ သူ့ရဲ့လကျတှဲဖျောတို့က ဒီလူကို သတျပဈဖို့ ဘယျလိုကွိုးစားကွသလဲဆိုတာကို စိတျဝငျစားဖှယျ မွငျတှရေ့မှာပါ။
ဦးခေါငျးထိခိုကျဒဏျရာရပွီးနောကျ လူသတျမှုတှကေို အဝေးကနေ မွငျတှလေို့ကျရတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ ဒီကိစ်စတှကေို ဘယျလိုကိုငျတှယျဖွရှေငျးမယျဆိုတာကို ဖနျသားပွငျကနေ မကျြလုံးမခှာနိုငျအောငျ ကွညျ့ရှုခံစားရမှာပါ။
ကမျးခွတေဈခုကို ရောကျသှားတဲ့ မိသားစုတှထေဲက ကလေးငယျလေးတှဟော ကြောကျဆောငျ အနောကျကနေ ထှကျလာခြိနျမှာ လူကွီးတှဖွေဈလာပွီး နောကျထပျထူးဆနျးတဲ့ အဖွဈမြိုးတှကေိုလညျး ကွုံတှရေ့တာကို စိတျဝငျစားဖှယျ မွငျတှရေ့မှာပါ။
၈။ PG: Psycho Goreman
ဒီဇာတျကားထဲမှာတော့ မောငျနှမ (၂) ယောကျဟာ ရှေးခတျေ စဈမိစ်ဆာတဈကောငျကို ပွနျလညျအသကျသှငျးမိပွီး ဒီမိစ်ဆာနဲ့အတူ စှနျ့စှနျ့စားစား ခရီးတှထှေကျကာ သူတို့ စိတျဝငျစားတာတှကေို ဘယျလို ဖျောထုတျကွမလဲ? ? ?
၉။ A Quiet Place 2
“Quiet Place” ဇာတျကား ပထမပိုငျးကို ကွညျ့ထားပွီးသူတှထေဲမှာ “A Quiet Place 2” ကို မကွညျ့ရသေးသူတှေ ရှိပါသလား? တကယျလို့ မကွညျ့ရသေးဘူးဆိုရငျတော့ ကွညျ့ရှုဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ။ Blunt မောငျနှံ ဖနျတီးထားတဲ့ ဒီဇာတျကားဟာ မမြှျောလငျ့ထားတဲ့ အလှညျ့အပွောငျးတှနေဲ့ ကွညျ့ရှုသူကို အံ့အားသငျ့စမေယျဆိုတာကို အာမခံပါတယျ။
၁၀။ Saint Maud
Lymphoma ဝဒေနာ ခံစားနရေတဲ့လူနာကို ကူညီကုသပေးနတေဲ့ ဘာသာရေးအစှဲအလနျးကွီးသူ သူနာပွုဆရာမလေးဟာ ဆိုးရှားတဲ့ အခွအေနတှေကေို ဘယျလိုဖွတျကြျောမလဲ? သူကိုယျတိုငျကရော ပွဿနာတှရေဲ့ အရငျးအမွဈဖွဈနမေလား?
၁၁။ The Stylist
ဒီဇာတျကားရဲ့ ဇာတျညှနျးရေးဆရာဟာ သူ့ရဲ့အရငျက ဆံညှပျဆရာတဈဦးအဖွဈ လုပျဆောငျခဲ့စဉျက ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ အဖွဈအပကျြတှအေပျေါမှာ မှီငွမျးပွီး လူသတျဖို့ လကျမရှံ့တဲ့ ထူးဆနျးတဲ့ ဆံပငျညှပျဆရာတဈယောကျကွောငျ့ အခကျတှရေ့တဲ့လူတှနေဲ့ ဇာတျလမျးကို ဖနျတီးပုံဖျောထားပါတယျ။
၁၂။ The Vigil
ကှယျလှနျသဆေုံးသှားပွီဖွဈတဲ့ လူသအေလောငျးတှကေို ညပိုငျးမှာစောငျ့ကွညျ့ရတဲ့ လူတဈယောကျအနနေဲ့ ကွုံတှရေ့မယျ့ ကြောခမျြးစရာကောငျးတာတှကေို ကွညျ့ရှုပွီးရငျတော့ ညသနျးခေါငျ တဈယောကျတညျး သနျ့စငျခနျး မသှားရဲလောကျတော့ပါဘူး။
၁၃။ Werewolves Within
ဒါကတော့ သမနျးဝံပုလှတှေအေကွောငျး စိတျဝငျစားတဲ့သူတှေ ကွညျ့သငျ့တဲ့ ဇာတျကားပါ။ ဇာတျကားအကွောငျးကိုတော့ ရှညျရှညျဝေးဝေး ရှငျးပွမနတေော့ပါဘူး။ ဒါရိုကျတာ Josh Ruben နဲ့ ဇာတျညှနျးရေးဆရာ Mishna Wolff တို့ရဲ့ ပူးတှဲဖနျတီးမှုမို့ ကွညျ့ရှုသူကို စိတျပကျြစမှော မဟုတျပါဘူး။
၁၄။ Willy’s Wonderland
Nicolas Cage တဈယောကျ စားသောကျဆိုငျကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးနတေဲ့အခြိနျမှာ ထူးခွားဆနျးပွားတဲ့ မိစ်ဆာတှနေဲ့ ဘယျလိုတိုကျခိုကျမလဲဆိုတာ စိတျမဝငျစားတဲ့သူ ရှိပါ့မလား? Nicolas Cage ပရိသတျ တဈယောကျဆိုရငျတော့ ဒီဇာတျကားကို ကွညျ့ကို ကွညျ့သငျ့ပါတယျ။
၁၅။ Wrong Turn
Appalachian တောငျလမျးကွောငျးမှာ ခွလေငျြလြှောကျနတေုနျး ပြောကျဆုံးသှားတဲ့သမီးကို ရှာဖှနေတေဲ့ ဖခငျတဈယောကျရဲ့သောကကို ခံစားတှမွေ့ငျရမှာဖွဈပွီး အဆုံးသတျမှာ သမီးလေးကို ပွနျရှာတှသှေ့ားမလား? ဖခငျဖွဈသူကကော ဘယျလိုအခကျအခဲတှကေို ကြျောဖွတျပွီး သမီးလေးကို ဆကျလကျရှာဖှမေလဲ? ဆိုတာ စိတျဝငျစားဖှယျတှမွေ့ငျရမှာပါ။
သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်နေတဲ့ Nadja ဟာ ကုသမှုခံယူဖို့ ဝေဒနာကို ကြိတ်ခံစားရင်း လေယာဉ်နဲ့ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ခရီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ပြန်ပေးဆွဲသူတွေပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက် လူသား သားငယ်လေးကို ကာကွယ်ဖို့ ပြန်ပေးဆွဲသူတွေကို ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ပြီး အဆုံးသတ်မှာ ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲ?
ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်တာမျိုးနဲ့ ဒဏ္ဍာရီဆန်တာမျိုး ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ “The Fear Street” ကို ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ အပိုင်း (၃) ပိုင်းပါပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ် ၊ ၁၉၇၈ ခုနှစ်နဲ့ ၁၆၆၆ ခုနှစ်တွေတုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့ ဆက်နွယ်မှုတွေကို စိတ်ခြောက်ခြားဖွယ် ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါတယ်။
သွေးထွက်သံယိုတွေနဲ့ အနိဌာရုံမြင်ကွင်းတွေကို ဆက်တိုက်မြင်တွေ့ရမှာမို့ စိတ်မခိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ မကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပေမယ့် Halloween Kills ရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင် လူသတ်သမားကြီး Michael Myers တစ်ယောက် Halloween ညမှာ လူတွေကို ဘယ်လိုသတ်ဖြတ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်ဆိုင်းနေသူတွေ အများအပြားရှိပါတယ်။
နာမည်ကြီး ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Eloise ရဲ့ အိမ်မက်လှလှတွေ ပျက်စီးသွားပြီးနောက် မထင်မှတ်ထားတဲ့ အလှည့်အပြောင်းက သူ့ရဲ့ ခေတ်မှီတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်မလဲ?
ညစဉ်ညတိုင်းမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ နေအိမ်ထဲကို ခိုးဝင်လာလေ့ရှိပြီး စာရေးဆရာနဲ့ သူ့ရဲ့လက်တွဲဖော်တို့က ဒီလူကို သတ်ပစ်ဖို့ ဘယ်လိုကြိုးစားကြသလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ဦးခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးနောက် လူသတ်မှုတွေကို အဝေးကနေ မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ဒီကိစ္စတွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာကို ဖန်သားပြင်ကနေ မျက်လုံးမခွာနိုင်အောင် ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ။
ကမ်းခြေတစ်ခုကို ရောက်သွားတဲ့ မိသားစုတွေထဲက ကလေးငယ်လေးတွေဟာ ကျောက်ဆောင် အနောက်ကနေ ထွက်လာချိန်မှာ လူကြီးတွေဖြစ်လာပြီး နောက်ထပ်ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေကိုလည်း ကြုံတွေ့ရတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ မောင်နှမ (၂) ယောက်ဟာ ရှေးခေတ် စစ်မိစ္ဆာတစ်ကောင်ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းမိပြီး ဒီမိစ္ဆာနဲ့အတူ စွန့်စွန့်စားစား ခရီးတွေထွက်ကာ သူတို့ စိတ်ဝင်စားတာတွေကို ဘယ်လို ဖော်ထုတ်ကြမလဲ? ? ?
“Quiet Place” ဇာတ်ကား ပထမပိုင်းကို ကြည့်ထားပြီးသူတွေထဲမှာ “A Quiet Place 2” ကို မကြည့်ရသေးသူတွေ ရှိပါသလား? တကယ်လို့ မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ ကြည့်ရှုဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ Blunt မောင်နှံ ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အလှည့်အပြောင်းတွေနဲ့ ကြည့်ရှုသူကို အံ့အားသင့်စေမယ်ဆိုတာကို အာမခံပါတယ်။
Lymphoma ဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့လူနာကို ကူညီကုသပေးနေတဲ့ ဘာသာရေးအစွဲအလန်းကြီးသူ သူနာပြုဆရာမလေးဟာ ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေတွေကို ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်မလဲ? သူကိုယ်တိုင်ကရော ပြဿနာတွေရဲ့ အရင်းအမြစ်ဖြစ်နေမလား?
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာဟာ သူ့ရဲ့အရင်က ဆံညှပ်ဆရာတစ်ဦးအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့စဉ်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေအပေါ်မှာ မှီငြမ်းပြီး လူသတ်ဖို့ လက်မရွံ့တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဆံပင်ညှပ်ဆရာတစ်ယောက်ကြောင့် အခက်တွေ့ရတဲ့လူတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးပုံဖော်ထားပါတယ်။
ကွယ်လွန်သေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ လူသေအလောင်းတွေကို ညပိုင်းမှာစောင့်ကြည့်ရတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြုံတွေ့ရမယ့် ကျောချမ်းစရာကောင်းတာတွေကို ကြည့်ရှုပြီးရင်တော့ ညသန်းခေါင် တစ်ယောက်တည်း သန့်စင်ခန်း မသွားရဲလောက်တော့ပါဘူး။
ဒါကတော့ သမန်းဝံပုလွေတွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ ဇာတ်ကားအကြောင်းကိုတော့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ရှင်းပြမနေတော့ပါဘူး။ ဒါရိုက်တာ Josh Ruben နဲ့ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ Mishna Wolff တို့ရဲ့ ပူးတွဲဖန်တီးမှုမို့ ကြည့်ရှုသူကို စိတ်ပျက်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Nicolas Cage တစ်ယောက် စားသောက်ဆိုင်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ မိစ္ဆာတွေနဲ့ ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မလဲဆိုတာ စိတ်မဝင်စားတဲ့သူ ရှိပါ့မလား? Nicolas Cage ပရိသတ် တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်ကို ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Appalachian တောင်လမ်းကြောင်းမှာ ခြေလျင်လျှောက်နေတုန်း ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သမီးကို ရှာဖွေနေတဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့သောကကို ခံစားတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး အဆုံးသတ်မှာ သမီးလေးကို ပြန်ရှာတွေ့သွားမလား? ဖခင်ဖြစ်သူကကော ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး သမီးလေးကို ဆက်လက်ရှာဖွေမလဲ? ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ့မြင်ရမှာပါ။
Tags Hollywood Horror Movies Thriller
Previous မကွာခငျရှာဖှတှေရှေိ့တော့မယျ့ ဒျေါလာ (၂၀) ဘီလီယံကြျောတနျဖိုးရှိ ကမ်ဘာ့အကွီးမားဆုံး ‘ရတနာသိုကျ’။
Next ထီပေါကျပွီးရလာတဲ့ငှတှေကေို ဘယျလိုနညျးလမျးတှနေဲ့ သုံးစှဲခငျြတယျဆိုတာ ပွောပွပွီးနောကျ လူတှကေို အံ့အားသငျ့စခေဲ့တဲ့အမြိုးသား။